Firenena 15 ao anatin’ny CEDEAO Nomen’i Madagasikara CVO maimaimpoana
Nivoitra omaly 1 mey 2020 mey maraina nandritra ny lanonana nanolorana ny anjara Tambavy CVO na Covid Organics 5 250 isa amin’ilay manasitrana sy 10 800 isa amin’ilay misoroka Coronavirus ho an’i Guinée-Bissau, iray amin’ireo firenena 15 mpikambana ao amin’ny CEDEAO
(Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest) teny amin’ny BANI Ivato, fa homena maimaimpoana ireo mpikambana ao anatin’io. Tonga teny an-toerana nanolotra ofisialy ny anjara Tambavy CVO tamin’ny irak’i Umaro Sissoco Embaló, filohan’i Guinée-Bissau ny filoha Andry Rajoelina. Nanasongadina ny ezaka nataon’ny siantifika Malagasy nahazoana izao vokatra izao i Andry Rajoelina. Avy amin’ny zava-maniry fanao fanafody, hoy izy, ka nilazany fa nisy ny fahombiazana azo tamin’ireo marary nisotro an’io Tambavy io, tao anatin’ny 7 ka hatramin’ny 10 andro. Nosinganiny tamin’ireo marary efa sitrana nambara fa noho ny fisotroana izany ny mpanakanto Tence Mena sy Eveka Katolika iray. Haparitaka any Afrika izany ny CVO ka ho hita any Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo ary Cap-Vert, izay mpikambana ao anatin’ny CEDEAO avokoa.